အင်တာနက်အနမ်းပုံကြောင့် မော်ရိုကိုနိုင်ငံမွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်း တုန်လှုပ် | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
အင်တာနက်အနမ်းပုံကြောင့် မော်ရိုကိုနိုင်ငံမွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်း တုန်လှုပ်
Posted by shannnews at 10:48:00 AM0comments
နာမည်ကျော် ဆိုရှယ်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebookပေါ် သို့ ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနှင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးတို့ နမ်းနေသည့်ပုံကို တင်လိုက်သူများအား ဖမ်းဆီးလိုက်မှုကြောင့် မော်ရိုကိုတွင် အွန်လိုင်းကန့်ကွက်မှုများ ညံလာသကဲ့သို့ ရှေးရိုးစွဲ မွတ်ဆလင်များကို အင်တာနက် အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှုက စိန်ခေါ်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အသက် ၁၅နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနှင့် ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတို့သည် နာဒါမြို့မြောက်ပိုင်းရှိ သူတို့ ကျောင်းပြင်ပတွင် နမ်းနေသည့် ပုံကို သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေး အဖေါ်ဖြစ်သူက ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး Facebookပေါ်တွင် တင်လိုက်သဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က သူတို့ သုံးဦးစလုံးကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုနမ်းနေသည့်ပုံ အွန်လိုင်းပေါ်သို့ တက်သွားပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ထိုဖမ်းဆီးမှု အပေါ် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသည့် အနေနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လှုပ်ရှားကြရာ ဖမ်းဆီးထားသူ သုံးဦးကို သုံးရက်အကြာတွင် တရားသူကြီးက ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အာဏာပိုင်တွေကရော၊ မော်ရိုကို လူ့အဖွဲ့အစည်းကပါ စောင့်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ဒါက ရှေးရိုးဆန်တဲ့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အတွက်လည်း အလေးအနက် စဉ်းစားလာ သင့်တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်လာပြီ”ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ မိုဟာမက်မာဒါနီက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများသည် Facebookကတစ်ဆင့် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာကြကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မီဒီယာ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ကောင်းစွာ ရရှိနိုင်ကြောင်း။ တစ်ခါတရံ နိုင်ငံတကာ အလေးထားမှုများကိုပင် ရရှိနိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံအတွက်သာမက ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများအတွက်ပါ အခက်တွေ့စေနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းလူငယ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် အမြင်မတော်စေရန် လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၈၃နှင့် ၄၈၄တို့ဖြင့် အရေးယူခြင်း ခံရပါက ထောင်ဒဏ် ၅နှစ်အထိ ကျခံရဖွယ်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ သတင်းက ဆိုသည်။
ပေါင်းနင်းဝါး(သီပေါအခေါ်)နှင့် ရှမ်းမလေး. သင်ဘယ်အရာကို ပိုစိတ်ဝင်စားသနည်း?
စက်တင်ဘာလ(၁၈) ဤ ပို့လေးသည် သျှာမ်း နှင့် မြန်မာ နှစ်ဘာသာတွဲပြီး လေ့လာလွယ်အောင် ရေးသားထားပါသည်။ အစမှ အလယ်- အဆုံးထိအောင် အစီအစဉ်အတိုင်းေ...
အပစ်ရပ်စဲရေးမူကြမ်းအတွက် ဇူလိုင်မှာ ထပ်တွေ့ကြမည်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်မူကြမ်းတစ်ခုရလာဖို့အတွက် လာမယ့်ဇူလိုင်လမှာ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနေ...
ဘိုးဘိုးအောင် ဖန်ဆင်းတဲ့ ဝ လား...... (၂)
မေလ ၂၆ ရက် ဓါတ်ပုံ ဝ ဒေသ၏ စီးပွားရေးမြို့တော် ပန်ဆန်း ခေါ် ပန်ခမ်း (Pang Kham) ဆုံးသွားပီဖြစ်သော သူငယ်ချင်း စောမားကပ်စ်စီ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှမ်းလူမျိုးတို့သည် ဗုဒ္စဘာသာကို အများဆုံးကိုးကွယ်သောလူမျိုးဖြစ်သည်
ရှမ်းလူမျိုးတို့ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နှင့်ပက်သက်၍ အချို့က ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် စုန်း၊ တစ္ဆေ၊ ကဝေ စသော မိစ္ဆာ အယူဝါဒ ထွန်းကားသည...
ဒီဇင်ဘာ(၃၀) ဒီဇင်ဘာ (ဒါမှမဟုတ်) မင်္ဂလာပွဲ များ၊ ပွဲတော်များ၊ ခရီးထွက်ခြင်း များသဖြင့် ပါတီပွဲကျင်းပရာ လရာသီဖြစ် သည့်အလျောက် လူတိုင...
ကောင်းမှု တရားတွေ ထိန်ထိန်သာတဲ့ သီတင်းကျွတ်လ
နားထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ ဗျောက်အိုးဖောက်သံကြောင့်ကျွန်မလက်ထဲကဖယောင်းတိုင်လေး အောက်သို့လွတ်ကျသွားစေပါသည် ။ ဒီရာသီ ဒီချိန်ကိုရောက်တိုင်း ကျွန်...